မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (Vedic Planetarium of Temple)
ISKCON သည် ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူ၏မြင့်မြတ်သောကျေးဇူးတော် AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada မှတည်ထောင်ခဲ့သော 'Krishna ဟိန္ဒူအသိပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း' အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ Bhagavad-Gita နှင့်အခြားအချိန်မတန်သောဝေဒကျမ်းများနှင့်အညီ Krishna အသိပညာသိပ္ပံကိုလေ့လာ၊ ဆယ်စုနှစ်ငါးခုကျော်အတွင်း ISKCON သည်ဘုရားကျောင်း ၃၅၀ ကျော်၊ ကျေးလက်နေလူထု ၆၀၊ ကျောင်း ၅၀ နှင့်စားသောက်ဆိုင် ၆၀ တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ISKCON အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဒီမှာ.
Vedic Planetarium ဘုရားကျောင်း (TOVP) ကို Srila Prabhupada ကသူလူသိများသည်မှာမိမိ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့အစည်း၏သရဖူဖြစ်သောရူပဗေဒအသိပညာနှင့်ဥာဏ်ပညာအထူးသဖြင့်စကြာဝologyာဗေဒ၊ ဘဝ၏မူလအစ၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးအရှင်သခင် Krishna ဖြစ်သည်။ နှင့်အများကြီးပိုပြီးကမ္ဘာမှတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးဝေဒဘုရားကျောင်း (နှင့်ပေတရု၏ Basilica ဘေးတွင်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး) အရွယ်အစားစတုရန်းပေ ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးအမြင့်ပေ ၃၅၀ အမြင့်၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘာသာရေးခုံး နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် 10,000 ည့်သည် ၁၀၀၀၀ ကျော်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း ၎င်းသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂလား၊ အနောက်ဘန်ဂရာရှိသန့်ရှင်းပြီးသီးခြားဆန်သောဟောင်းနွမ်းသောလယ်ကွင်းများတွင်ကိုလကတ္တားမှသုံးနာရီခန့်ဝေးသောဂင်္ဂါမြစ်နှင့် Jalangi မြစ်များစီးဆင်းရာနေရာဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး planetarium နှင့်အဘယ်ကြောင့် Mayapur အတွက်?
Srila Praphupada သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများသည်ဝေဒသဘောတရားများအရနေထိုင်ပြီးနေထိုင်နိုင်မည့်မြို့တစ်မြို့ကိုလိုလားခဲ့သည်။ ထိုမြို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ က Hare Krishna လှုပ်ရှားမှု၏မူလတည်ထောင်သူဖြစ်သည့်သီရိ Caitanya Mahaprabhu, ရွှေ Avatar ၏မြင့်မြတ်သောမွေးရပ်မြေ Sridhama Mayapur တွင်တည်ရှိသည်။ ဤမြို့သည် ISKCON ၏ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုနေရာချရန်လျောက်ပတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Planariarium တစ်ခု၏အယူအဆမှာ Srila Prabhupada ၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးအရှေ့ပညာ၏ဗဟုသုတနှင့်အနောက်တိုင်း၏နည်းပညာနှင့်ဝေဒကျမ်းမှအခွင့်အာဏာအရ ၀ ိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာကိုတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ TOVP တွင် visitors ည့်သည်များအားဝေဒယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသင်ကြားခြင်းနှင့်ဝေဒ၏သိပ္ပံပညာကိုရှင်းပြပေးမည့်ပြတိုက်များနှင့်ပြပွဲများလည်းရှိလိမ့်မည်။
အသစ်သောဗိမာန်တော်၏ Mayapur အပေါ်ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
TOVP တည်ဆောက်ခြင်းသည်အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမည့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်ဒေသခံစီးပွားရေးကိုအကျိုးပြုလိမ့်မည်။ ဗိမာန်တော်သစ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ဝေဒယဉ်ကျေးမှု၏နောက်လိုက်များအကြား Mayapur ၏အရေးပါမှုကိုသန့်ရှင်းသောနေရာအဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ နှစ်စဉ် six ည့်သည်ခြောက်သန်းသည် ISKCON Mayapur သို့နှစ်စဉ်ဆင်းသည်။ ဗိမာန်တော်ဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုအရေအတွက်ကိုနှစ်ဆတိုးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် အနောက်ဘင်္ဂလားအစိုးရသည်စီမံကိန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်၎င်း၏အကူအညီကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
၂ ဝဝ ၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအလွန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတွင်းပိုင်းအကာအရံများသည်ပြီးပြည့်စုံပြီးဖြစ်သည်။ ၂.၅ acကကျယ်သည့် Pujari ကြမ်းပြင်အားဝတ်ပြုရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်အခန်း ၆၉ ခန်းပါ ၀ င်သည်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နောက်အဆင့်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Lord Nrsimhadeva ၏ယဇ်ပလ္လင်တည်ရှိရာအရှေ့ Wing ၏အဖွင့်ဖြစ်သည်။ သီရိသီရိရဒ်မဒဟာဗာ၊ ပန်ချာတာဗာ (Lord Caitanya နှင့်သူ၏အပေါင်းပါများ) နှင့် Guru Parampara (၀ ိညာဉ်ရေးရာမာစတာဆက်ခံသူများ) တို့၏နတ်ဘုရားများနှင့်ဗိမာန်တော်ကြီးဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ planetarium ပြီးစီးခြင်းနှင့်အချို့သောအတွင်းနှင့်အပြင်အလှဆင်ခြင်းတို့သည်ပြီးစီးရန်နှစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
လက်ရှိ site သည် Srila Prabhupada အားဝတ်ပြုရာအိမ်တော်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့သောမူလ site ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပိုင်မြေပေါ်တွင်ရှိသည် ISKCON။ ယခင်အစီအစဉ်များသည်ဗိမာန်တော်အား ISKCON မပိုင်သေးသောမြေပေါ်တွင်နေရာချထားခဲ့ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမ ၀ ယ်နိုင်ခဲ့ပါ။
Srila Prabhupada ၏ဘုရားကျောင်းကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နှင့်နောက်ပုံစံကိုမည်သည့်ဗိသုကာပုံစံကိုတည်ဆောက်သင့်သည်ကိုမူလ Sril Prabhupada ၏မူလညွှန်ကြားချက်များကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏ဒီဇိုင်းအသစ်ကို 'အသစ်' ဒီဇိုင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူသည်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်အရှေ့နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီရှိအမေရိကန်မြို့တော်အဆောက်အ ဦး ၏အမိုးခုံးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Vedic Planetarium (ToVP) တွင်ဘုရားမည်မျှနတ်ဘုရားမည်မျှရှိနေလိမ့်မည်နည်း။
Acharyas (သန့်ရှင်းသောဆရာများ) ၏ Gaudiya Vaishnava ၏ဆက်ခံထံမှနတ်ဘုရားတစ်ဆယ့်ငါးထပ်ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်အတူလက်ရှိထည့်သွင်းထားသည့်နတ်ဘုရားများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှနှစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Srila Prabhupada ၏အမိန့်နှင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်ဝဲမှညာသို့အတိအကျ လိုက်၍ Guru Parampara, Panca Tattva နှင့် Radha Madhava ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနတ်ဘုရားများကိုဗိမာန်တော်၏အဓိကအမိုးခုံးအောက်ရှိယဇ်ပလ္လင်သုံးခုတွင်သေးငယ်သောယဇ်ပလ္လင်သုံးခုပေါ်တွင်နေရာချလိမ့်မည်။ ဤယဇ်ပလ္လင်၏စုစုပေါင်းအရှည်မှာစုစုပေါင်း ၁၃၅ ပေ / ၄၁ မီတာဖြစ်သည်။ ဤကြော့ရှင်းစွာတောက်ပနေသောဤယဇ်ပလ္လင်များသည်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်နှင့်ရွှေကြွေများဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးစကျင်ကျောက်နှင့်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။
သခင်ဘုရား Nrisimhadeva ဘယ်မှာလဲ
Lord Nrisimhadeva သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို TOVP ၏ East Wing အမိုးခုံးအောက်တွင်ထားရှိမည်။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ရှေ့တွင်ရပ်နေစဉ်၊ ညာဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေစဉ်၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်အလယ်၌ရပ်နေသူတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပင် Lord Nrisimhadeva ၏ဘုရားကျောင်းကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခန်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သောအလွန်ပွင့်လင်းသောပုံစံဖြင့် TOVP တည်ဆောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ဘရာဇီး၊ အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်စကျင်ကျောက်များအပြင်ရွှေစင်များပေါင်းစပ်ထားသည့်ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
အားလုံးပြီးပါပြီပြီးနောက်ပြုသောအမှု, Mayapur နတ်ဘုရားသူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ TOVP နေအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ကိုရရှိပြီး Srila Prabhupada နှင့် Parampara တစ်ခုလုံးနှင့်သူတို့၏ Lordships Sri Sri Pancha Tattva & Sri Sri Radha Madhava / Ashtasakhis နှင့် Sri Prahlad Maharaj နှင့် Sri Nrsimhadev တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောနေ့စွဲအပေါ်ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်း Gaura Purnima 2022. ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းချက်များရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရက်ရောစွာလှူဒါန်းရန်နှင့်သင်၏ကတိတော်များကိုအချိန်ပြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်သင်တို့အားလုံးကိုများစွာမှီခိုအားထားလျက်ရှိသည်။
TOVP စီမံကိန်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့်တည်ဆောက်သူများအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကဘာလဲ။
TOVP စီမံကိန်းသည်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အဓိကကျောရိုးဖြစ်သည့်ကျွမ်းကျင်သောအတိုင်ပင်ခံများနှင့်တည်ဆောက်သူများ၏ကျော်ကြားသောအဖွဲ့ရှိခြင်းသည်အလွန်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
TOVP အိမ်တွင်းဗိသုကာအဖွဲ့ - အမှန်တကယ်တွင် Srila Prabhupada သည် TOVP အတွက်အဓိကဗိသုကာဖြစ်သည်။ သူ၏စာများ၊ စကားပြောဆိုမှုများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များစွာတွင် Srila Prabhupada သည်၎င်း၏ Vedic Planetarium ၏မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များအပါအ ၀ င် TOVP စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အရေးကြီးသော parameters များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
TOVP အဖွဲ့သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဗိသုကာဆိုင်ရာယူနစ်နှင့်အတူ Srila Prabhupada ၏ဤညွှန်ကြားချက်များကိုရှုပ်ထွေးစွာသုတေသနပြုပြီးယနေ့မျက်မှောက်တွင်ဖော်ပြနေသောဗိသုကာဘာသာစကား၊ ဒီဇိုင်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာသဘောတရားများသို့ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ဤဗိသုကာဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အခြားထိပ်တန်းဗိသုကာကုမ္ပဏီများကိုငှားရမ်းခြင်းထက် ပို၍ ကျွမ်းကျင်မှု၊
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ - Mr. BB Choudharyစီမံကိန်းနှင့်ဒီဇိုင်းဗျူရို။ သူသည်နယူးဒေလီရှိနာမည်ကြီး Akshardham စီမံကိန်းကိုလည်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
Gammon India Ltd. - TOVP ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကကန်ထရိုက်တာ။ Gammon သည်ကျော်ကြားသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယ၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့်ဥရောပတို့တွင်စီမံကိန်းများစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ တွင်ထင်ရှားသောအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သောအိန္ဒိယ၏ဂိတ်ဝေးကိုပင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
Cushman & Wakefield စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံ - နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၀ န်ထမ်း ၄၅၀၀၀ ကျော်သည်ရုံး ၄၀ ကျော်နှင့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၇၀ တွင်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ Grand Opening ကို ဦး ဆောင်မည့်ဆောက်လုပ်ရေး၏နောက်ဆုံးအဆင့်များကို Gammon ကတည်ဆောက်ပြီးစီးပြီးနောက်၎င်းတို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ငှားရမ်းခဲ့သည်။
စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့်ရေအတိုင်ပင်ခံများ - Chennai မှ ESolutions MEP နယ်ပယ်တွင်သူ၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကြောင့်လူသိများသောအောင်မြင်သောအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Acoustical Engineering - Tikendra Singh အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနှင့်ပြည်ပရှိအသံနှင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
TOVP အတွက်မည်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုနေသလဲ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်အတွက်သာမန်ထက်, ဒါမှမဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး, လက်တွေ့ကျနှင့်တာရှည်ခံပါသလား
ပထမ ဦး စွာ TOVP သည်သာမန်အဆောက်အအုံတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ အနည်းဆုံးအနှစ်တစ် ၀ က်ခန့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ထူးခြားသည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနားလည်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သော Adbhut Mandir ကိုသာမန်လူနေအိမ်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ခြင်းမပြုနိုင်ဟုပြောရန်လုံလောက်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သိသာထင်ရှားသောအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏလိုအပ်သည့်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလက်တွေ့ကျပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမလုပ်ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောbuildingရာမအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်၎င်း၏ပြီးမြောက်သည့်အလုပ်များကိုဈေးပေါသောသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပုံစံဖြင့်ပြီးစီးအောင်လုပ်ခြင်းသည်လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှလာရောက်လည်ပတ်သောဘုရားဖူးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှနောင်နောင်မျိုးဆက် Vaishnavas သည်ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်လျှင်ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် TOVP အတွက် ၀ ယ်ယူခဲ့သောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏အသုံးဝင်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ ဗေဒအရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသေချာစွာစဉ်းစားထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။
အဘယ်အရာကို Kalashas မျိုးကိုအမိုးခုံးသုံးခုတွင်ထိပ်ဆုံးရောက်နေသနည်း၊ သူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
TOVP ၏ Kalash ၏ဗဟိုသည်အထပ် ၆၀ (၅၀ '/ ၁၅ မီတာ) ခန့်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြား ISKCON ဘုရားကျောင်းများထက်ပိုမိုကြီးမားနိုင်သည်။ အဓိက Kalashas သုံးခုလုံးသည် Chakras နှင့် Chatris ရှိမျှော်စင်ငယ်များ (မျှော်စင်များ) နှင့်အတူတိုက်တေနီယမ်နိုက်ထရိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိများဖြစ်သည်။ ဤအ Kalashas သုံးမျိုးသည်ဗိမာန်တော်၏သရဖူရတနာများသာဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သိသိသာသာအကွာအဝေးမှမြင်နိုင်သည်။ Kalash နှင့် Chakras များအားလုံးတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်၊ ရုရှားမှသြသဒေါက်ချာ့ချ်များကိုတည်ဆောက်ရာတွင်တန်ဖိုးထားတတ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောရုရှားမှကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၁TP2T1.2 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) တန်ဖိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
TOVP ဆောက်လုပ်ရေး၏“ မြင့်တက်နေသောဘတ်ဂျက်” နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားနှင့်အဖြစ်အပျက်ကဘာလဲ။
TOVP စီမံကိန်းစတင်ချိန်တွင်မည်သည့်ကန်ထရိုက်မဆိုစာချုပ်မချုပ်ဆိုမီနှင့်အမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရေးကိုမစတင်မီ ၁.၃၂ သန်း ၆၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ပမာဏကိုစူပါဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု ၁ သန်းမှ ၁ သန်း ၃၂၀ အနက်အမ်ဘာရီရာပရာဘူယူသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေစုဆောင်းမှုမှစုဆောင်းရမည့်ငွေပမာဏနှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၂ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ကိုပေးခဲ့သည်။ အချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် $30 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ကိုလက်ကျန်ငွေစုထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည် TOVP စီမံကိန်းကို $60-70 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အတွက်ပြီးဆုံးသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများရှိလင့်ကစားလိုအပ်သောချိန်ခွင်လျှာကိုသိသိသာသာတိုး။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်လာသဖြင့်သဘာဝကန ဦး မှန်းခြေဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လက်ခံထားသောမူတစ်ခုမှာဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအလွန်လျင်မြန်သောကာလအတွင်းပြီးစီးရန်လိုအပ်သောရန်ပုံငွေအားလုံးမရှိလျှင်ဘတ်ဂျက်သည်သဘာဝကျသည်။ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်တစ်ခု၏ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်သည်စတုရန်းပေလျှင် ၁TP2T180 မှ ၁TP2T200 ဖြစ်နိုင်သည်။ TOVP ၏လက်ရှိခန့်မှန်းခြေဘတ်ဂျက် ၁TPTPT90 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) သည်တစ်စတုရန်းပေလျှင် ၁TP2T150 သို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် GBC အဖွဲ့၏လက်ခံမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်မှုများအတွက်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပုံမှန်မျှော်လင့်ထားသည့်တိုးမြှင့်စဉ်းစား။
လက်ရှိ TOVP အဖွဲ့နှင့်အထူးသဖြင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုသည်အဘယ်နည်း။
လက်ရှိ TOVP အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာမပြောင်းလဲဘဲကျန်ရှိနေပြီး Sridham Mayapur ရှိသူ၏ TOVP အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်အတူ Ambarisa Prabhu ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ TOVP ၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း။ Ambarisa Prabhu သည်ဥက္ကChairman္ဌအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအတွက်သူ၏ဒါရိုက်တာမှာ Braja Vilas Das ဖြစ်ပြီး Jananivas Prabhu၊ ISKCON Mayapur Chandrodaya Mandir မှ Pujari နှင့် Spiritual Mentor တို့ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Mayapur နှင့် US ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးများတွင်တိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်း၊ စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစသည်ဖြင့်ကူညီပေးနေသည့်အခြားသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများအားဖော်ပြခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ချန်လှပ်ခံရလိမ့်မည်။
TOVP အဖွဲ့ ၀ င်အချို့ကြားတွင်သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်။ ဤသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား၊ ထိုကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအနေအထားကဘာလဲ။
ဤကိစ္စကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်းပြထားသည် နောက်ဆက်တွဲခ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လရက်စွဲပါ GBC အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏စာဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Sacred Deeds Foundation သို့လှူဒါန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤသို့သောလှူဒါန်းမှုများသည် Mayapur ရှိ TOVP သို့အမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေကြောင်းမည်သို့အတည်ပြုနိုင်မည်နည်း။
ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၂၀၁၆ မတ်လရက်စွဲပါ GBC အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏စာကိုအထူး ကျေးဇူးပြု၍ အမှတ်။ ၄ ။နောက်ဆက်တွဲခ)
USA တွင်ရှိသော Sacred Deeds Foundation သည် TOVP ကိုယ်စားလှူဒါန်းမှုများကိုလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အာဏာမရှိတော့သဖြင့်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်တရားဝင်နှင့်လုံခြုံသောတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လှူဒါန်းမည်နည်း။
ဟုတ်ပါသည်၊ USA တွင်ရှိသော Sacred Deeds Foundation သည် TOVP ကိုယ်စားလှူဒါန်းမှုများကိုခံယူခွင့်မရှိတော့ပါ။ ယခုမှ စ၍ သင်သည်သင်၏လှူဒါန်းမှုများကို TOVP သို့၎င်း၏တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ TOVP ဖောင်ဒေးရှင်း, INC။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ကို
TOVP ဖောင်ဒေးရှင်း, INC ။
13901 ဘ 142 ရိပ်သာ
Alachua, FL 32615 ။
TOVP ၏ဘဏ္recordsာရေးမှတ်တမ်းများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် TOVP အကောင့်များကိုကြည့်လိုပါကမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
TOVP ၀ င်ငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အစီရင်ခံမှုတွင်ဘဏ္transparencyာရေးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ancesာငွေများအားလုံးကို ၄ င်း၏အဆင့် ၄ စာရင်းစစ်စနစ်ဖြင့်ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ ဤရွေ့ကားကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသောစာရင်းစစ် ၄ ချက်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားလုံးသည်သူတို့၏လှူဒါန်းမှုများကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။
CNK RK နှင့် Co. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယစာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ် http://www.arkayandarkay.com/
Cushman & Wakefieldကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအကြံပေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုကြီးကြပ်သည်။ http://www.cushmanwakefield.co.in/
ISKCON အိန္ဒိယဗျူရို ပုံမှန်စာရင်းကိုင်အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိပါတယ်
ငါတို့ အမေရိကန်စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီ TOVP ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့်ဝင်ငွေကိုကိုင်တွယ်သည်
TOVP အတွက် ၀ င်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အကောင့်များကို TOVP ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အောက်မှာကြည့်ပါ လှူဒါန်းပါ -> ဘဏ္Reportာရေးအစီရင်ခံစာများ.